बगैचा सजावटका लागि टायरहरूको मेढो
बढ्दो, बहु-मंजिलो इमारतको प्रवेश गरेर तपाई विभिन्न शिल्पहरू देख्न सक्नुहुन्छ जसको बासिन्दाहरूले आफ्नो इलाकालाई सजाय दिन्छन्। तिनीहरू प्रायः अपशिष्ट बनेका छन्। यो त कारहरु बाट टायर हो, वा विभिन्न रंग र भोल्युमको प्लास्टिक बोतलें। यो सबै बर्बाद विभिन्न शिल्पहरूको लागि धेरै सजिलो छ। टायरबाट स्वान, स्नेह, कछुआ र माढक लोकप्रिय भए र स्थानीय क्षेत्रहरूमा बारम्बार दर्शकहरू भए । तपाईं आफ्नो श्रम र समय व्यतीत नगरी, यस साइट को एक सुन्दर डिजाइन, लगभग केहि केहि मा निवेश बिना बना सकते हो।
माढक बनाउन धेरै तरिकाहरू छन्। तीमध्ये प्रत्येक एकदम सरल छ, त्यसैले यो सबैसँग उपलब्ध छ कि पाङ्ग्राहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ, र तिनीहरूका आकार। सबै टायरहरू प्रयोगको लागि अग्रिम तयार हुनुपर्छ। यो गर्न को लागि, तिनीहरू धोए, सूखा र हरियो रंग संग चित्रित हुनु आवश्यक छ। यदि कुनै हराएको छैन भने, तपाईं कुनै पनि अर्को छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाइँसँग साधारण परी कथा हुनेछ । पाना गर्न चाहँदैन, जस्तो छोड्नुहोस्।
टायरको राम्रो माढक तीन टुक्राहरूबाट प्राप्त हुन्छ। तपाईं एउटै साइजको दुई पाङ्ग्राहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तिनीहरूका आयामहरू पर्याप्त ठूलो हुन्छन् भने, तपाइँ थप टायरहरू संलग्न गर्न सक्नुहुन्न। अब यो सबै मा निर्भर गर्दछ मा के तपाईं चाहनुहुन्छ: बच्चाहरु को लागि एक खिलौना बनाउन वा एक सुन्दर फूल बगैचा। सबैभन्दा पहिले, हामी दुई टाढा टायर राख्दछौं। यदि तपाइँ फूल संस्करणमा बस्थे भने, त्यसपछि रोपणको लागि प्रत्येक चक्र भित्र भित्र निस्केर। त्यसपछि हामी तेस्रो टायर माथि माथि राख्यौं। यसमा, पनि, तपाईं भूमि डाल्न सक्नुहुन्छ। अब प्लास्टिक बाल्टी वा बोतलबाट आँखा बनाउँछ। रंगिया र मुलाका साथ मुख रंग। यो मूर्ति तयार छ। यो नली र काठ को टुक्रा देखि पाम जोडेर थोडा कंक्रीड हुन सक्छ। तैयार भूमिमा हामी फूलहरू रोप्छौँ। यसले टायरहरूको धेरै सुन्दर फूल बिस्तार गर्यो - एक माढक जसले कुनै पनि बगैचा साइटलाई सजाय गर्नेछ।
यदि तपाईंसँग दुई साना पाङ्ग्राहरू र एक ठूलो छ भने, तपाईं अर्को व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन धेरै मूल देख्न सक्नेछ। हामी एउटा ठूलो हरित टायर स्ट्याक गर्छौं, त्यसपछि अर्को ठाडो ठाडो दुई साना को स्थापना गर्न, तिनीहरू आँखाको स्थानमा हुनेछन्। अधिक स्पष्टताको लागि, हामी पुरानो प्लास्टिक बेसिन प्रयोग गर्दछौं। एक, जो ठूलो छ, हामी रातो रंगको साथ प्वाइन्ट गर्छौं र यो पहिलो पहलमा राख्छौं, तर हामी दुई साना साना साना टायरहरूमा स्थापनाको लागि प्रयोग गर्दछौ। टायरहरूको माढक तयार छ। यो खेल मैदानमा प्रयोग गर्न राम्रो छ।
एक अर्को मा स्थापित दुई टायरबाट कुनै रोचक विकल्प प्राप्त हुँदैन। यहाँ निम्न पहिया माथिल्लो भन्दा बढी शक्तिशाली हुनु पर्छ। टायरको यस्तो माढक स्थिर थियो भनेर सुनिश्चित गर्न, तिनीहरू धातु रड संग निश्चित हुनुपर्छ। सुन्दरताको लागि, तपाईं लिओनियम प्रयोग गरेर पाङ्ग्राहरूको भ्वाईसहरू सिध्याउन सक्नुहुन्छ। हरियो हरियो मा र फेरि आँखा र मुख कोर्नुहोस्। प्वाइन्टको सट्टा प्लास्टिकको बोतलहरू फिट। तपाईं एक राजकुमारी माढक बनाउनुहुन्छ, उसलाई एक तीर दिनुहोस् र एक मुकुट फाँट गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग मात्र एक टायर छ भने, निराश हुनुहोस्। योबाट, पनि, एक राम्रो माढक प्राप्त गर्न सक्छ। यो विकल्प फूल बगैचाको तल प्रयोग गर्न राम्रो छ। हामी पाङ्ग्राहरू स्ट्याक गर्छौं, पृथ्वीको साथ खालीपन भर्नुहोस्। पहिया रिम मा एक मुख राख्नुहोस्। आँखाहरु र पंजाहरु बोतलों देखि बनाइयो। तपाईं एक रूख मा एक राम्रो माढक राख्न सक्नुहुन्छ। यसले एकदम थोपा सामाग्री लिनेछ। टायरको मुख्य भागबाट टुक्रा टुक्रा बनाउनुहोस्, यो फिर्ता हुनेछ। र हामी क्यामेराबाट पंजाहरू बनाउँछौँ। सबै एकै ठाउँमा हामी रूखमा समाधान गर्छौं। साइट को सजावट को लागी एक सुंदर आंकडा बनाउन को लागी तपाईं कुनै अनावश्यक चीज को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक बाल्टी, एक बेसिन, एक पुरानो हेलमेट र यहाँ सम्म कि शौचालय कटोरा हुन सक्छ। सबै चीज फिट हुनेछ र आफ्नो बगैचालाई सजाय गर्न, पत्थर पनि।
कागजको क्रसबना कसरी बनाउने? हाम्रो आफ्नै हातको साथ कागज क्रॉसहो
अनावश्यक चीजहरूको दोस्रो जीवन। आफ्नै हातले घरको लागि शिल्प
सजिलो तरिका कसरी रगतको वर्णन गर्ने
पाइप ट्रंक ग्याँस पाइपलाइन
Palmistry जीवन रेखा
Kefir: लाभ र हानि, को संरचना र गुण
को स्ट्रबेरी बिरुवा र सधैं बाली संग हुन?
इन्जिन ठंडा सिस्टम को इनकार र तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्न
Wardrobe बच्चा, वा नवजात जाडो कसरी पोशाक गर्न
थ्रेडिङ मिसिन - उद्योग मा नयाँ उपकरण
किन हरियो पानी छ, र कसरी एक जलजीवालय मा सामना गर्न?
महिला किन बढी मानिसहरू भन्दा छोडपत्र लागि फाइल संभावना छ?